I-Campill Cottage-i-rustic charm kunye nentuthuzelo
"I-Camphill Cottage" ime kwipropathi yeehektare ezingama-60, umgama wemizuzu emihlanu ukusuka kwiivenkile zokutyela, iivenkile zamandulo, iiwayini, iindawo zomnquma kunye neepabhu zakudala zembali yaseRylstone, lolona khetho lufanelekileyo kwabo bafuna ikhefu kwisantya sesixeko. Chitha usuku lokuqubha/ukukhwela inqanawa (ukuqesha) kuMlambo iCudgegong.
Le ndlu yangasese inamagumbi okulala amabini angama-queen, indawo enkulu ye-mezzanine eneebhedi ezintathu ezingatshatanga kunye nesifundo kunye nebhedi yesofa (i-8 iyonke).
Indlu yangasese inamagumbi amakhulu, ikhitshi eligcinwe kakuhle, ilinen esemgangathweni, ebanzi ebiyelwe emantla ejonge iveranda, ibbq kunye neseti yangaphandle phantsi kwemithi enomthunzi kunye ecaleni kweegadi zerozi. Ibekwe kwihektare yeegadi ezibunjwe umhlaba ezinemithi yeentsini ezivuthiweyo, kunye nomthi ovuthulukayo ocandiweyo wokungena kumgama oziimitha ezingama-400 ukusuka kwikhaya ke ngoko kukho ubumfihlo obuninzi, uxolo kunye nokuzola kodwa kukufutshane ngokwaneleyo edolophini ukonwabela inkcubeko yecafe.
Lo mmandla unentaphane yezilwanyana zeentaka kunye nendlela yentlalo yoluntu engakumbi yeekhefi, iivenkile zamandulo, iindawo zewayini kunye neendawo zokutyela. Amagqabantshintshi ale ndawo yiGunguddy (intloko yoMlambo iCudgegong) kwiPaki yeSizwe yaseWollemi, iFern Tree Gully, kunye nevenkile yethu yokwenyani edumileyo yeXian "29 nine 99" (ukubhukisha kubalulekile). Ipropathi inamahashe atya kwipaddocks eluhlaza kunye nocingo kunye nocingo lukaloliwe. Iintaba zenza umva wedama elikhulu elineembono ezikhwankqisayo. Kufanelekile ukuqhuba usuka eSydney ukuya kutshaja kwakhona iibhetri. Abantwana kunye nezilwanyana zasekhaya zinendawo eyaneleyo yokuhlola nokubaleka.
Iyafumaneka kufutshane ukuba iindwendwe ziyayifuna.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-8511
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Rylstone